Rasaasa News – Jwxo-shiil: Shacab Somaliland Waxaa Laayey Booliska Degaanka
on March 20, 2012 12:00 am
Jijiga, Mar 20, 2012 [ras] – Isbadalka wakhtigu wareeg, wadkiyo xumihiyo wanaag walaal isagaa ka dhiga, wir yaa kala weecin kara. War xume been weheshadiyo, walaahi ninkii maraba Janadu waydaariyaa.
Degaanka Somalida Ethiopia waxaa uu xuduud dheer oo dhinac walba ah la wadaagaa dalka Somaliya, waxayse xasareedu had iyo goor soo noq noqotaa xuduud kooban oo ah qayb ka mid ah xuduuda u dhaxaysa Ethiopia iyo Somaliya [waqooyi galbeed Somaliya].
Taariikhdu waa macalin in wax laga barto mudan. Waxaynu dib u milacsanaynaa bisihii August 2004, oo ah xili uu khilaaf xuduudeed oo la mid ah midka maanta u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo Ethiopia uu ka jiray degaanka Somalida.
Xilgaas isaga ah waxaa awood ciidan iyo taageero shacab oo xoog leh degaanka Somalida Ethiopia ku dhex lahaa ururkii ONLF.
Khilaafkaas waxaa Ideecadaha BBC-da doodo isku kohosho ah ay ku dhex martay maamulka Somaliland iyo masuuliyiintii ururka ONLF.
Maamul gabaleedka Somaliland xiligaas wuxuu ku eedaynayey ONLF in ay waxyeelo u gaysatay gaadiid laga leeyahay maamul gabaleedka Somaliyeed [Somaliland], oo ka shaqaynayey degaanka Somalida Ethiopia.
Waxay Ideecada BBC-du dood ku kulmisay gudoomiyiihii ONLF, Janaral Maxamed Cumar Cismaan iyo xoghayihii arimaha dibada ee maamulka Somaliland Cabdulahi Maxamed Dulcaale.
Janaraal Maxamed Cumar Cismaan waxaa uu yidhi “gaadiidka maamulka Somaliland waanu gubaynaa, inta ay shacabkanaga Hargaysa ku dhibaataynayaan, umana ogolin in ay ciidanada soo galaan.”
Cabdulahi Maxamed Ducaale waxaa uu yidhi “Maxamed Cumar Cismaan Somaliya dhibaatadaada ayaan uga soo cararay, walina dhibaatadii ayaad nala daba socotaa.”
Maxamed Cumar Cismaan baa yidhi “dhibaatada Somaliya idinkaa dhigay shacabka Ogadeniya in aad dhibaataysaan idinka yeeli mayno.”
Waxaa dooda la soo galiyey labo oday oo ka kala socda degaanka Somalida Ethiopia iyo maamulka Somaliland ah. Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Duulane Rafle oo joogay Jijiga iyo Boqor Buur madow oo joogay Hargeysa.
Ugaas Cabdiraxmaan Duulane wuxuu yidhi “xad baa u dhaxeeya Ethiopia iyo Somaliya waa in visa lagu soo gala lagaggana baxaa.” “ma yeelayno budhcad ka soo talowda xadka oo dhibaato gaysata ka dibna xadka ka talowda.”
Boqor Buurmadow baa yidhi ” xaga iyo xagaba waan degnaa xuduudka in la xidhana raali kama nihin.” “Ma kala maarmo dadkanagu Ethiopiana way degnaa Somaliyana way degnaa horena dhibaato uma jirin.”
Maamlmo ka dib waxay BBC-du waraysatay Naxariis Eebe ha siiyee Dr. Maxamed Siraad Dolaal, waxaa la waydiiyey maxaad gaadiidka u gubteen?
Dr.Dolal baa yidhi “gaadiid ma anaan gubin shacabku waa shacabkanagii, waxaanu u dagaalamayno waa shacabka, siday suurto gal ku noqon in aanu gubno gaadiidka shacabka aanu u dagaalamayno.” Waa gumaysiga wax gaadiidka gubaaya, gumaysiga ayaa gaadiidka sharciga siiyey isaga ayaana gubaaya”
“Maamulka Somaliland ONLF ha la soo xidhiidho ayadaa balan qaadaysa amaanka gaadiidka maamulka Somaliland.” Dr. Dolal
Maanta degaanka Somalida Ethiopia waxaa ka jira ciidamo boolis ah oo xoog leh oo leh tababar ku filan ilaalinta xuduuda, nafta iyo maalka dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia iyo kuwa dariska.
Ururkii ONLF, oo hore loogu eedayn jiray wixii ka dhaca degaanka Somalida Ethiopia haatan meesha way ka baxeen, oo nabad bay qaateen. Marka laga reebo koox yar oo argagixiso ah oo aan haysan taageerada dadweynaha degaanka, oo ku dhuumaalaysta dibadaha iyo maamulka Somaliland.
Waxaa la yaab leh, oo wax lagu qosla ah, in maanta Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil] iyo maamulka Somaliland ay si isku mid ah u eedeeyaan dawlada Ethiopia iyaga oo leh “dawlada Ethiopia ayaa gumaaday shacab reer Somaliland ah.”
Oohintu orgiga ka wayn maamulka Somaliland waxaa u qarsoon ujeedo ayna wali fahmin Ethiopia iyo dawlada degaanka Somalida Ethiopia midna, oo ah in ay dab galiso dalka Ethiopia hoyna uga dhigto Al Shabaab.
Degaanka Somalida Ethiopia, waxaa ku nool shacab Somaliyeed oo badan oo aan ka yarayn shacabka ku nool dalka Somaliya. Dadweynahaasi waxay u badan yihiin xoolo dhaqato, hadii ayna jirin dawlad kala ilaalisa waxaa xaqiiq ah in dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia uu qoys qoys isu layn lahaa sida kuwa dalka Somaliya.
Colaada ugu horaysana waxay ka dhex bilaaban lahayd shacabka Somaliyeed ee ku nool maamul gabaleedka Somaliyeed [Somaliland] iyo shacabka dega waqooyi-bari ee degaanka Somalida Ethiopia.
Jwxo-shiil iyo Siiraanyana, dagaalka beelaha dhex mara ayay ka mid noqon lahaayeen iyaga oo aan ka talinaynin doorka wanaagsan ee lagu yaqaan odayada gaboobay.